Hid Led Replacement - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Hid Led Replacement)
Ebube anyị dị iri asatọ na asatọ na-eme ka bọmbụ ọkụ bụ 104 00 lumens, 360 ogo okporo osisi na-anọchi 250w MH HPS bulbs. Ewubere Lamp a na-eme ka ìhè dịkwuo na steeti iji mee ka ọrụ ọkụ dị elu na-eme ka ọkụ ọkụ n'okporo ámá ma ọ bụ ihe nrịgo elu. Ihe pụrụ iche nke Mercury Vapor Led Replacement bụ ikike itinye ihe...
40W Ogwe ọka 100W Ọkpụkpụ na-agbanwe ihe
Bbier 40W Okpokoro Ọkụ bụ maka mgbidi ballast gafere nnukwu mmiri, n'ọnụ mmiri dị ala ma ọ bụ ngwa post. A ghaghị ịgafe ihe nkedo mgbe ọ dị. Nke a 40 Watt Led Corn Bulb r gosipụtara 100W HID, 100W fluorescent na 100W incandescent. The d irect waya nso voltaji anyị 100 Watt Metal Halide Dugara Nnọchi bụ 100-277V....
Hid Led Replacement HID Led Replacement 300w Metal Halide Led Replacement Metal Halide LED Replacement led hid replacement Mercury Vapor Led Replacement 100w metal halide led replacement Mercury Vapor Bulb Led Replacement